Nnwom 111 NA-TWI - Awurade ayeyi dwom - Kamfo Awurade! - Bible Gateway
Nnwom 110Nnwom 112
Nnwom 111 Nkwa Asem (NA-TWI)
111 Kamfo Awurade! Mifi me koma nyinaa mu bɛda Awurade ase wɔ ne nkurɔfo a wɔabɔ gua no anim. 2 Nneɛma a Awurade yɛ no yɛ nwonwa! Wɔn a wɔn ani gye ho no pɛ sɛ wɔte ase. 3 Tumi ne anuonyam wɔ nea ɔyɛ biara mu na ne trenee wɔ hɔ daa.